Ho an'ireo mpiantsehatra - Lemur Conservation Network
You are here: Home › Ho an’ireo mpiantsehatra
Ho an’ireo mpiantsehatra
Fitaovana sy Loharano ho an’ireo mpiantsehatra eo amin’ny Fiarovana
Ny Lemur Conservation Network no dingana manaraka izay voalaza ao anatin’ ity drafitr’asa iray ity izay entina hiarovana ny varika na fantatra amin’ny teny angilisy hoe « Lemur Action Plan » izay nivoaka ny 21 Febroary 2014 lasa teo tao amin’ny gazety « Journal science ». Ity drafitr’asa ity dia teraka taorian’ny fandrindrana ilay atrik’asa hoe « Lemur Red-Listing and Conservation Planning workshop » izay nokarakarain’ny IUCN-SSC Primate specialist Group ny faha 9-14 volana Jolay 2012. Izy ity no voalohany amin’ireo atrik’asa izay nifanesy taty aoriana ary mikasika ireo « mammifères » na ireo biby mampinono sy mitera-batana ho an’ny IUCN Red List. Natao tao Antananarivo io atrik’asa io ary natrehan’ireo manam-pahaizana manokana momba ny varika efa mihoatra ny 60 isa , ary ny 40 amin’izy ireo dia avy eto Madagasikara avokoa.
Misy indostria mandany aman-tapitrisa dolara ho an’ny fijerena manokana eran-tany ireo vorona rehetra. Misy ireo mpikaroka momba ireo vorona na ireo izay manam-pitiavana manokana hijery ireo vorona eran-tany no mitety izao tontolo izao hijery vorona fotsiny. Fitiavana efa latsa-paka ao anatin’izy ireo no tsy maintsy mahita ireo vorona rehetra. Hatramin’izao dia ireo mpikaroka sy ireo olona tia vorona no manao izany. Ankehitriny kosa dia hametraka toy izany ihany koa zareo IUCN/SSC Primate Specialist Group, mba ahafahan’ireo mpikaroka sy ireo tia ireo biby Primata, hitety izao tontolo izao ka tsy ho latsa-danja amin’izany ny fijerena varika ary irina ho lasa hanana toerana lehibe amin’ny fizahana ireo biby ho an’ny mpizahan-tany izany. Raha maniry ny hahalala bebe kokoa mikasika izany « Primate watching and lige-listing » izany ianao dia tsidiho ny rohy an’ny Primate Specialist Group ahalalàna bebe kokoa mikasika ireo fepetra sy zavatra tsy maintsy tandrovana amin’ny fanantanterahina izany.
Torolàlana tokony arahina mahakasika ny sary mampiseho gidro
Misy ny lahatsoratra navoakan’ny sampana mpandraharaha ny fifandraisain’ny olombelona sy ny gidro ao amin’ny UICN mikasika ny torolàlalana tokony arahina mahakasika ny sary mampiseho gidro.
Matetika isika no mahita ireo sary na sarimihetsika mikasika ny gidro, izay ilazana ny « primates » rehetra ka ao anatin’izany ny varika. Manazava anefa ny ao anaty lahatsoratra fa « raha sanatria ka tsy misy fanazavana tsara ilay sary na tsy mazava ny fotom-pisiany dia mety hitarika ny olona handika vilana ny heviny izany. Izay hevi-diso izay dia mety hiteraka voka-dratsy tsy niniana ho an’ny fitandrovana sy fiarovana ireny biby ireny mba tsy ho lany tamingana ». Manasa anao hamaky ny lahatsoratra fa manome olàna telo lehibe mahatonga mikasika ny sarin’ny olona sarin’olona miaraka amin’ny gidro na manakaiky loatra azy izy ireo.
Mankasitraka betsaka ireo izay nandika ny lahatsoratra amin’ny fiteny Malagasy dia ny fikambanana Ary Saina, izay misy an’i Dr Onja Razafindratsima sy Veronarindra Ramananjato sy i Tinah Martin. Zava-dehibe ho antsika Malagasy ny fahafantarana sy fahalalana izany toro-làlana izany.
Ireo loharano tsara ho fantatra sy jerena mikasika ny varika
Loharano momba an’i Madagasikara